La qabsashada bulshada
Haddii aad Nederland ku noolaaneyso, waxaa kuu fican in dhaqso aad afka u barato, dhaqanka aad fahamto, iyo nidaamka qoran iyo kan aan qorneyn aad taqanno. Markaa si dhaqso leh ayaad wax kasta u haleeli kartaa waxa aadna dareemeysaa soo dhoweyn; waxa aad qeyb ka noqotay bulshada Nederland. Taasi waxaa la dhahaa ka mid noqoshada bulshada. Ka mid noqoshada bulshada mararka qaar waa dhib badnaan kartaa, laakiin waa xitaa mid xiisogelin iyo daareen kicin leh: duni cusub ayaa hortaada ka furmaaya!
Ku guuleysiga ka mid noqoshadaada bulshada waa in uu inta badan adiga amba-qaadkaada (hammigaada) ka yimaado. Waxaa barbar socda in ka mid noqoshada bulshada ay dowladda Nederland dadka waddanka ku cusub ay: qasab kaga dhigtay la qabsahsada bulshada iyo saxiixa Caddeynta ka Qeybgelista.
La qabsashada bulshada qasabka ah
La qabsashada bulshada qasabka ah waxa ay quseeysaa qof waliba oo degaanka ku cusub oo da’ diisa 18 sano iyo 67 sano jir u dhexeeyso. Waajibaadka la qabsashada bulshada waxa ay bilaabaneysaa marka lagu siiyo oggolaasho joogitaan. Waxa aad waajibkaa fulisay marka aad caddeynta ka qeybgelista saxiixdo iyo Imtixaanka la Qabsashada Bulshada ama Imtixaanka Dowliga NT2 aad ku guuleysato. Imtixaannadaan waxa ay ka kooban yihiin qeybaha, afka Nederland-ka, Aqoonta Bulshada Nederland-ka (KNM) iyo Ku Jaheynta Suuqa Shaqada Nederland-ka (ONA).
Raadinta koorso la qabsashada bulshada
Adiga ayaa ka mas’uul ah in aad iskuul ama koorso la qabsashada bulshada ah aad xulato. Website-ka www.ikwilinburgeren.nl ee ‘Blik op Werk’ waxa aad ka heli kartaa iskullada aagagaarkada ku yaal. ‘Blik op Werk’ waa sumad, taasi oo wax ka sheegeysa tayada iskuulka. Waxaad arki kartaa iskuul kasta sida ay ardada ugu qanacday, tirada ardada ka najaxday imtixaanka inta ay tahay iyo kharashka dersiga saacaddiba. Haddii aad xulato iskuul leh sumadda-Blik op Werk waxa aad deyn weydiisan kartaa DUO. Deyntaa waxa aad iskaga bixin kartaa koorsada la qabsashada bulshada iyo imtixannada.
Muddada la qabsashada bulshada
In aad imtixaannada oo dhan soo qaaddo waxaad heysataa muddo saddex sano ah, ama shan sano haddii marka hore ay tahay in alifka aad barato (barashada akhrinta iyo qoraalka afka Nederland-ka). Taasi waxa la dhahaa muddada la qabsashada bulshada. Haddii aad muddadaa gudaheeda imtixaannada oo dhan soo qaaddo aadna leedahay oggolaasho magangelyo, markaa ma lagaa rabo in aad deynta DUO dib u bixiso. Soo qaadista imtixaanka la qabsashada bulshada waxa uu xitaa muhiim u yahay haddii aad rabto in aad codsato oggolaasho joogitaan oo aan xaddadneyn ama basaboor Nederland ah. Haddii aad imtixaannada aad ku soo qaadi weyso muddadaa gudaheeda – aadna lahayn xitaa sabab ay taasi kugu hirgeli weysay – waxaa lagu dul saari karaa ganaax dhan 1250 yuro.
Dheereynta muddada la qabsashada bulshada
Haddii ay kula noqoto 300 saac oo dersi ah keddib in aad saddex sano ka badan aad u baahan tahay si aad imtixaannadaada u soo qaaddo, waxa aad mararka qarkood heli kartaa dheereynta muddada la qabsashada bulshada. Taasi waxa aad ka codsan kartaa DUO. Hey’adda u Adeegta Qaxootiga ama iskuulkaada ayaa taasi kaa caawini kara.
Iskaa af Nederland-ka u baro iyo leylis dheeri ah
In aad koorso af Nederland-ka ah gasho qasab ma aha, laakiin waa ay adag tahay in aad koorso la’aan aad imtixaanka la qabsashada bulshada soo qaaddo. Waxa taa barbar socota inta badan in degmada rabo in aad caddeyn karto in aad af barasho ku mashquulsan tahay. Haddii aad rabto in aad iskaada afka ugu tababarato, waxaa jira fursado badan, sida:
Dhowaan Nederland yimid
Website-ka www.netinnederland.nl waxaa laga helaa video-yaal kala duwan oo xagga hoose kaga tarjuman afafka Nederland-ka, Ingriiska ama Carabiga. Waxa aad ka fiirsan kartaa idaacadda iyo broograamyo kale oo TV-ga iyo filimyo kale oo gaagaaban oo mowduucyo kala duwan oo la qabsashada bulshada ku saabsan.
Kani waa ‘app’ fudud oo ay ka buuxaan taswiir qayaxan, oo lagu habeeyay mowduucyo kala duwan (afafka Nederland-ka, Ingriiska iyo Carabiga) sida 'gaadiidka dadweynaha', ‘degaanka', 'caafimaadka' iyo 'raashinka'. App-kan waxa aad ka soo dejjisan kartaa ha noqoto Google Play Store amaba Apple App Store.
Maktabadaha dadweeynaha waad tegi kartaa si aad afka Nederland-ka ugu tababarato, waxaa xitaa u tegi kartaa si aad dad ugula kulanto iyo hawlgallo kale oo kugu saacida ka mid noqoshada bulshada.
Iyo waxaa kaloo muhiim ah in wax badan aad afka ku tababarato. Waxaa aad malaha heli kartaa tababare Hey’adda u Adeegta Qaxootiga ama ka socda urur kale? Ma leedahay deris ama dad aad is garaneysaan oo si joogto ah afka Nederland-ka aad ugu tababaran karto? Ama waxa aad qaban kartaa shaqo tabarruc ah, markaa waxa aad yeelaneysaa qibrad shaqo waxa aadna baraneysa afka.
Caddeynta ka Qeybgelista
Qiimeyaasha iyo nidaamyada waddanba waa kaga duwan yahay kan kale. Soo dege cusub ee Nederland ahaan waxaa ku saameyn doono qiimeyaasha iyo nidaamyada Nederland oo malaha ka duwan waxa aad hore u caadeysatay. Nederland dastuurkeeda iyo sharciyadeeda waxaa ku yalla dhowr ka mid ah qiimeyaahs iyo nidaamyada, sida:
Xornnimada diineed iyo ra’yi baxsashada.
Dadka waa isku wada mid, in aad tahay rag, dumar, jinsiga ka duwan u tage, jinsigiisa u tage rag ah, jinsigiisa u tage dumar ah, ama jinsi beddeshe.
Adiga in aad wax takoorto ma aha dadka kalena in aay adiga ku takooraan ma aha.
Adiga ayaa iskaada u go’aaminayo cidda aad guursaneyso.
Mowduucyadaan waxaa laga wadahadlaayaa inta ay socdaan ‘workshop-yada’ ku tala galka caddeynta ka qeybgelista. Uma baahnid in taas aad iskuul u raadsato; wixii ku saabsan ku tala galkaasi waxa aad casumaad ka heleysaa degmada ama ciddii bixineysa ‘workshop-yada’. Marka ay duruusta dhammaato waxa aad saxiixeeysaa caddeynta ka qeybgelista. Taasi waa in ay dhacdaa sannad gudihiis keddib marka aad oggolaashada joogitaan heshay. Caddeynta ka qeybgelista waa qeyb qasab ah oo la qabsashada bulshada ka mid ah. Haddii aad leedahay oggolaasho joogitaan oo caadi ah, waa in aad taasi ka bixisaa 150 yuro, haddii aad leedahay oggolaasho joogitaan magangelyo, waxaa kharashka bixinaaya degmada.
Doorka Hey’adda u Adeegta Qaxootiga
Haddii aad La Qabsashada Bulshada su’aalo ka qabto, ha ka shakinin in aad weydiiso hagahaada Hey’adda u Adeegta Qaxootiga. Waxa aan kugu caawini karnaa warbixin ku saabsan La Qabsashada Bulshada, koorsayaasha la qabsashada bulshada ee kugu fiican ee aagaarkaada iyo deynta DUO.
Warbixin dowladda oo ku saabsan la qabsashada bulshada oo ku qoran afaf kala duwan